यौन स्वास्थ्य Archives - नेपाली खोज
खानुहोस् यी चीज जसले बढाउछ यौ’नइच्छा
१. गोलभेंडा : गोलभेंडालाई रातो रंगमा बदल्ने लाइकोपिन नामक तत्वले मानिसमा यौ’नइच्छा बढाउन सहोग गर्दछ । यसले पुरुषमा प्रोस्टेट क्यान्सरको ख’तराबाट पनि जोगाउँछ । २.पालुङगो : पालुङगोको साग नियमित सेवन गर्नाले यौनक्षमतामा बृद्धि ल्याउनुका साथै यौ’नाङ्गमा रक्तप्रबाह समेत बढाइदिन्छ । ३. भिन्डी : भिन्डीमा बिभिन्न किसिमका भिटामिन तथा जिंकतत्वहरु पाइन्छ जसको नियमित सेवनले सम्भोग सम्बन्धी […]
के हो यौ,न रोग ? यौ,न रोग बढ्नुको ४ प्रमुख कारण
मानिसको बद्लिदो जीवनशैलीका कारण यौन रोग पनि बढ्दै गएको छ । यौन रोग बढ्नुको मुख्य ४ कारण निम्न छन् १) अहिले सामाजिक मुल्य र मान्यतामा परिवर्तन आएसंगै युवावर्ग विवाहपुर्व यौन सम्पर्क बनाउन कुरा सामान्य भइसकेको छ । यौन क्रियाकलापमा बढेको स्वतन्त्रताले यौन रोग पनि बढ्दै गएको छ । असुरक्षित यौन संबन्धले महिलामा विभिन्न प्रकारका यौन […]
पुरुषको तुलनामा महिलाको अंग अलिक संवेदनशिल हुन्छ । त्यसैले यसको सरसफाई र उचित स्याहार भएन भने अनेकन स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छन् । हामी नुहाउनुलाई मात्र सरसफाइ भन्ने गछौँ, तर, नुहाउदाँ त बाहिरी सफाइसँगै मात्र हुन्छ । त्यसैले ट्वाइलेट गएपछि अनिर्वायरुपमा यौन अंगको सरसफाइ गर्नुपर्छ । धेरै जसो किशोरी, युवती र महिलालाई यो पनि थाहा हुँदैन […]
ह स्तमै थुन किशोरावस्थामा हुने आम यौ न व्यवहार हो । यद्धपी कतिपयमा यो व्यवहार पाको उमेरसम्म रहने गर्दछ । आफ्नो यौ न उ त्तेजना शान्त पार्ने सशक्त, सुरक्षीत र गतिलो माध्यम भएकोले अधिकांश महिला तथा पुरुषले यो व्यवहार रोज्ने गर्दछन् । त्यसो त सन्तुलित ह स्तमै थुनले शारीरिक तथा मानसिक फाईदा हुने बताइन्छ । […]
‘से क्स’ का लागि अनिच्छुकलाई हुनसक्छ यस्ता रोग
तपाईँलाई थाह छ कि छैन से क्ससंग व्यक्तिको स्वास्थ्य पनि जोडिएको हुन्छ । नियमित यौ न क्रियाकलापमा सामेल व्यक्ति र सामेल हुन नपाएको व्यक्तिबीचको व्यवहारमा निकै फरक हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ से क्स स्वास्थ्यको दर्पण हो । चिकित्सकहरु भन्छन्, यदि तपाँई आफ्नो पार्टनरसग से क्स गर्न मन पराउनुहुँदैन भने तपाईँ आफू कहि न कहि आफ्नो […]
यो; निबाट सेतो पानी बग्ने समस्या छ ? यस्ता छन् उपचार विधि
अधिकांश महिला यो; निबाट सेतो पानी बग्ने समस्याबाट पीडित छन् । यो; नि र पाठेघरमा हुने संक्रमणले महिलामा यस्तो समस्या देखिन्छ । सेतो पानी बग्न थालेमा महिलाको यो;निमा संक्रमण बढ्न थाल्छ । यस्तो समस्याको समयमै उपचार गरिएन भने पाठेघरको क्यान्सरसमेत हुन सक्छ । यहि कुरालाइ मध्यनजर गर्दै आज हामी तपाईलाई स्त्रिरोग विशेषज्ञ डा. अनुपमा शर्मासँग […]
हरेक मानिसले सपना देख्ने गर्छन् । सपनाको प्रकृति भने फरक–फरक हुन्छन् । उसो त हरेक मानिसले हर दिन फरक–फरक प्रकृतिका सपना देख्ने गर्छन् । मान्छेले वास्तविक जीवनमा पाउन नसकेका वा दबाएर राखिएका इच्छाहरू सपनामा प्राप्त गरेको कुरा देख्छन । यसै गरी दबेर रहेका यौ न इच्छा पनि सपनामा छताछुल्ल हुन्छन् । विभिन्न अध्ययन अनुसार अधिकांश […]
एजेन्सी । निमयित यौ’न सम्बन्ध राख्ने महिला वा पुरुषलाई किटान गर्न गाह्रो छ । तर, महिलाको भने केही शारीरिक रुपमा परिवर्तन आउने दाबी गरिएको छ । पुरुषको तुलनामा केही महिलाको शारीरिक रुपमा परिवर्तन आउने गर्छ । यसलाई यौ’न सम्बन्धको कारण मात्रै नलिई अन्य मा’नसिक लगायत कारण मानिन्छ । तर, एक अध्ययनले भने नियमित यौ’न सम्बन्ध […]
काठमाडौं । भियाग्राले सेक्स पावर बढाउने दाबी गरिन्छ । यसको सेवनले यौन दूर्वलताको अन्त्य गर्ने विश्वास गरिन्छ । यौन दूर्वलता भएकाहरुलाई यसको सेवन हीनताबोधको अन्त्य गराउँछ । भियाग्रााको सेवनले यौनांगमा हुने रक्तप्रवाहले यसलाई उत्तेजित अवस्थामा राखिराख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यौनेच्छा जाग्छ, तब पुरुषको यौनांगमा रगत प्रवाह गर्ने धमनी खुल्ला हुन्छ भने रगत फर्काएर लाने […]
के हो यौ न रोग ? यौ न रोग बढ्नुको ४ प्रमुख कारण
मानिसको बद्लिदो जीवनशैलीका कारण यौ न रोग पनि बढ्दै गएको छ । यौ न रोग बढ्नुको मुख्य ४ कारण निम्न छन्… १) अहिले सामाजिक मुल्य र मान्यतामा परिवर्तन आएसंगै युवावर्ग विवाहपुर्व यौ न स म्पर्क बनाउन कुरा सामान्य भइसकेको छ । यौ न क्रियाकलापमा बढेको स्वतन्त्रताले यौ न रोग पनि बढ्दै गएको छ । असुरक्षित […]
एजेन्सी । निमयित यौ न सम्बन्ध राख्ने महिला वा पुरुषलाई किटान गर्न गाह्रो छ । तर, महिलाको भने केही शारीरिक रुपमा परिवर्तन आउने दाबी गरिएको छ । पुरुषको तुलनामा केही महिलाको शारीरिक रुपमा परिवर्तन आउने गर्छ । यसलाई यौन सम्बन्धको कारण मात्रै नलिई अन्य मानसिक लगायत कारण मानिन्छ । तर, एक अध्ययनले भने नियमित यौन […]
काठमाडौ । संसारभरी नै एउटा मान्यता छ महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले यौनिक चाहना पनि शब्दमै ब्यक्त नगर्ने एक अध्यनले देखाएको छ । यहाँ महिलाले यौ न सम्बन्ध राख्न चाहेको समयमा […]